DTG → Yakananga Kune Nguo kudhinda inzira yemazuva ano yakananga
Kudhinda kweDTG - nzira yemazuva ano yekushongedza yakananga
Kudhinda kweDTG kana "Direct To Garment" iri nzira yemazuva ano kunongedza chaiko kwemachira uye zvipfeko. Iyo DTG maitiro anotendera iwe kuti ushandise chero magiraidhi kune donje machira kana donje ine musanganiswa weelastane / viscose. Graphics zvinogadzirwa uchishandisa yakakosha purinda. Iyo midziyo yatinayo mumuchina wedu paki ndiyo yazvino purinda modhi Hama GTXpro Bulkiyo, nekuda kwemisoro yemabhizimusi, inokurumidza kudhinda yakananga pane izvo zvinhu. Kudhinda neiyo DTG maitiro inogonesa rakakwana ruvara kubereka nekushanduka kwemavara. Kudhinda kunogoneka pasina chikonzero chekugadzirira chirongwa kubva pachidimbu chimwe chete.
Kudhindisa pikicha paT-shati uchishandisa iyo DTG nzira
DTG yakananga purinda
Hupamhi mikana yeDTG kudhinda
DTG anodhinda pane vanozvipira timu T-shirts
Kuteedzera kurudziro yemugadziri kunotibvumidza isu kunakidzwa nemhedzisiro yeprojekiti yedu kwenguva yakareba. Kutenda nerubatsiro rwechikwata chedu, iwe uchagadzirisa nzira yekushongedza, uye iwe unogona kusarudza zvigadzirwa zvakafanira kwazvo mune yedu shopu.
Kudhinda kweDTGkudhinda pane zvipfekoDTG pamabhegiDTG yakachipagadget zvine printT-shirts ine yakadhindwakudhinda kwakanangakudhinda kwemifananidzo uye zvinyorwalogo yekambani inodhindaDhinda pane sweatshirtskudhinda paT-shirtskudhinda paT-shirts zvechiitikopurinda pane zvipfekokudhinda pane zvipfeko nemutengo wakadererakudhinda pane t-shirtskudhinda pamabhegikudhinda kubva pachidimbu chimwebvunzo kudhindakudhinda kwemifananidzomubairo wemakwikwizvipfeko zvine chinyorwa chevashandichipo kuna gogochipo kuna sekuruchipo chemukadzichipo kuna amaichipo chemurumechipo cheshamwarichipo cheshamwarichipo kuna sisichipo kuna babaKrisimasi chipochipo chegorechipo chekuzvarwazvipo zvevashandizvipo zvegazvipo zvemazororozvipo zvakasarudzikakudhinda zvakachipazvakachipa kudhindazvachose logo kudhindachinyorwa chako paT-shirtschinyorwa chako pazvipfeko